Seychelles inoita chaiyo kuoneka paBIT 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles inoita chaiyo kuoneka paBIT 2021
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • Italy Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Nzvimbo yekuchitsuwa, kuburikidza neSeychelles Tourism Board Italy hofisi, vakapinda muchirongwa chechokwadi chekushambadzira nevatengi BIT (Borsa Internazionale Turismo) 2021, yakaitirwa online kubva muna Chivabvu 9-14.
Kukurukurirana kwakagadziriswa neEppo Plaza, chikuva chedigital, icho chaive nenzvimbo yekuratidzira nzvimbo iyo varatidziri vaigona kusimudzira nemultimedia nezvimwewo zvirimo.
BIT Hurukuro yemusangano nzvimbo yakaratidza pamusoro pezviitiko makumi mapfumbamwe ekuburitsa zvine tarisiro pazviitiko zvepamusoro.
MyMatching yakashanda senge chikuva chekutsvagisa uye zvakavanzika misangano yebhizinesi pakati pekupa uye kudiwa, uko vatengi nevatengesi vaigona kutaura kuburikidza nevhidhiyo.
Varipo pamitambo yemazuva matanhatu yedhijitari vaive 6 vatambi vemaindasitiri ezvekushanya, avo vakatsaurira mazuva matatu kubhizimusi uye mamwe ese kune vatengi.
Kudyidzana kwacho kwakafambiswa neEppo Plaza, chikuva chedigital chine chiteshi zvitatu, chaive nenzvimbo yekuratidzira iyo varatidziri vaigona kusimudzira nemultimedia nezvimwe zvirimo kuratidzira zvinopihwa kwavanoenda, network nevashandisi uye nekubatana nevafambi.
Iyo BIT Talks musangano nzvimbo yakaratidzira pamusoro pezviitiko makumi mapfumbamwe zvekushambadzira zvine tarisiro pazviitiko zvepamusoro-soro muBIT Special Talks. Pamusoro pezvo, BIT Nharaunda, online shanduko yeMyMatching, yakashanda senge chikuva chekutsvagisa uye zvakavanzika misangano yebhizinesi pakati pekupa uye kudiwa, uko vatengi nevatengesi vaigona kutaura kuburikidza nevhidhiyo chat.
The Seychelles Islands yaive nechiteshi chaicho apo vashanyi vaigona kuwana ruzivo kuburikidza nemabhurocha, mavhidhiyo, mifananidzo, mabhuku, uye zvimwe zvekushambadzira zvinovakirwa kure kwairi kuenda.